Cunto: Ganacsiga yaryar oo ah Bartilmaameedka Ugu Fiican ee Dambiyada Cyber
Waxyaabaha ayaa caadi ahaan ahaa MNH Platinum, oo ah shirkad ka shaqaysa kirada baabuurta. Wax yarma ogtahay in kaliya riix link of link email ah ay u badan tahay in ay ganacsiga halis gelin.
Sannadkii hore, shirkad fadhigeedu yahay Blackburn waxay heshay 12, 0000 oo ku yaala shirkaddashabakad la isku diro. Kadib, dambiilayaashu waxay dalbadeen madax furasho dhan £ 3,000 si loo gooyo faylasha.
Dhammaan isku daygarrada ah in laga saaro fayruska iyada oo aan lumin macluumaadka muhiimka ah ee caddaynaya,hay'addu ma laheyd doorasho halkii ay bixin lahayd. Agaasimaha maamulka ee shirkadda Mark Hindle ayaa sheegay in aysan si buuxda u diyaar garoobinee loogu talagalay cyber-attacks sababtoo ah dayacaadda ee saamaynta weerarka sida weerarka ay yeelan kartaa shirkadda - what are paid backlinks.
Kiiskani ma aha mid gooni u ah, xirfadlayaashuna waxay ka digayaan in ganacsiyada yar yar yihiinin badan oo u nugul hanjabaadaha internetka tan iyo inta badan kiisaska aan la diyaarin.
Andrew Dyhan, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Dijital ah, waxay ka hadlaysaa siyaabaha loo ciqaabayo dambiileyaasha internetka inay weeraraan ganacsiyada yaryar.
Taariikh ahaan, shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (SMEs) maaha bartilmaameedka dambiyada internetkalaakiin sannadka 2015, Toni Allen, waxa uu ku dooday in waxyaalihii isbedelay. Sida laga soo xigtay baadhitaan ay xukuumaddu ku samaysay xadgudub ammaan,75 boqolkiiba ganacsiga yaryar ayaa soo sheegay in suurtogalnimada weerarkii sanadka 2012 iyo isbeddelladu ay kordheen sanadka 2013 iyo 2014.
Tirakoobka ka yimid Symantec, oo ah shirkad khatar ku ah ammaanka internetka ayaa tilmaamaya in ka badan kala badhweerarrada phishing loo geystay e-maylkii 2012 ayaa ka soo horjeeda ganacsiyada yaryar.
Qawaaniinta cusub ee yurub ayaa abuuraya amniga internetka ee SME-yada si aad ah muhiim u ahmaadaama ay haystaan ​​ujeedo ah inay ilaaliyaan xogta macmiisha. Xeerarkii dhowaan la soo saarey ayaa la filayaa in uu ciyaaro sanadka 2018 wuxuuna keeni karaaururka ayaa lagu ganaaxay 4 boqolkiiba dakhligooda sanadlaha ah ama € 20m oo ka mid ah kan kasta oo ku haboon in loo fasaxo jebinta amniga in ay farageliniyadoo xogta macmiilka.
Dambiileyaashu waxay u arkaan SMEs sida bartilmaameedyada jilicsan waa inta badan, waxay u socdaan abaalmarin weyn.
Ololaha Cyber ​​Streetwise, oo ah qorshe ay maamusho Xafiiska Arrimaha Guduhu waxay soo bandhigeysaa waxyaabahan soo socdasida hanjabaadaha internetka ee ka soo horjeeda SMEs:
Weerarka wuxuu dhacaa marka dambiilayaashu helaan shabakadda ururka iyada oo la hagaajinayoCawaaqib aan rasmi ahayn ee codsiyada, taas oo u sahlaysa iyaga inay galaan xogta shirkadda.
Waxay dhacdaa marka arjiga xaasidnimada ah ee kiisaska intooda badan lagu helo phishingEmail wuxuu xiraa macluumaadka shabakadda ururka. Kadibna, dambiilayaasha ayaa dalbaday madaxfurasho lacag ah oo ah £ 500- £ 1,000,000faa'iido furaha furaha.
Xaaladaha badankood, dadku waa xidhiidhka ugu nugul silsiladda amniga, iyo mid muhiim ahqayb ka mid ah jebinta macluumaadka waa natiijo ka timid macluumaadka lumay ama la faafiyay shakhsi qaldan. Xitaa weerarada caadiga ahwaxay yeelan kartaa saameyn aad u weyn marka xaaladaha ay PII ku lug leedahay.
Diidmada weerarka adeegga
Marka ururku leeyahay macluumaad badan oo weyn oo ku jira server-kiisa oo loo riixo akanaalka xun. Noocyada noocan oo kale ah ayaa si sahlan loogu fulin karaa maalgashi yar.
Waxay dhacdaa marka qofka weerarka geysta uu shakhsi ahaan shakhsi ahaan u leeyahay shirkaddagaraacid ama jebiyaan xisaabtooda emailkooda waxayna ku qasban yihiin qof leh hay'ad maaliyadeed in ay fuliso lacag bixin.